६ वर्षअघि ‘कार्बाही’ फिल्मबाट डेब्यु गरेकी अभिनेत्री महिमाले त्यसपछि कम नाम सुनिएका ‘अप्रिल फुल’ ‘चियर्स’, ‘नो स्मोकिङ’, ‘ढुङ्गे युग’जस्ता फिल्ममा अभिनय गरेकी थिइन्। यत्तिका फिल्ममा अभिनय गरे पनि उनले चर्चा भने कमाउन सकेकी थिइनन्।
मनोचिकित्सकका अनुसार यौनको लत भएका व्यक्ति बढीजसो एकान्तमा बस्न रुचाउँछन्। अपरिचित विपरीत लिंगीलाई जिस्क्याइहाल्ने, अश्लील शब्द बोल्ने, यौनको संकेत गर्ने, एकभन्दा धेरै यौनजोडी परिवर्तन गरिरहने, हस्तमैथुन गरिरहनेजस्ता लक्षण तथा व्यवहार देखाउँछन्।
दुई बर्ष पुरानो घाउको दुश्मनी
म्युजिक नेपालले नेपाली श्रष्टाका करोडौँ मूल्य बराबरका गीत र भिजुअल आफ्नो पेवा जसरी प्रयोग गरिरहेको र सोबापत दिइनुपर्ने रोयल्टी र अन्य लाभांशमा वञ्चित गरेको भन्दै केही श्रष्टाहरुले प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी गरिरहेका छन्।
बच्चा मार्ने कानुन
नेपालमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुन बनिसक्यो। तर चिकित्सक यो कानुन मान्ने मुडमा छैनन्। उनीहरुको तर्कअनुसार २८ हप्ताको गर्भ तुहाउनु मानवताविरोधी काम हो।
जाँच गरेपछि आस्था जान खोज्छिन् तर आस्थाले बोकेर ल्याएको कफी ती महिला प्रहरीले उनैलाई थमाउन खोज्छिन् आस्था लिन मान्दिनन्। कफीलाई प्रहरीले टेबलमा राखिदिन्छिन्। त्यही बेलामा दुई जनाबीच भनाभन भएको देखिन्छ। आस्थाले कफी पर सार्न खोजेको देखिन्छ। महिला प्रहरीले उनीतिर कफी सार्छिन्। यसरी दुईबीचको दोहोरीले कफी पोखिन्छ।
परमिताको नक्कली प्रायश्चित
मंसिर २८ गते बिहान एक महिलाको ज्यान जाने गरी बुढानीलकण्ठमा भएको सवारी दुर्घटनासम्बन्धी। जुन दुर्घटनामा ४२ वर्षीया लीला देवकोटाको ज्यान गएको थियो। दुर्घटनाको करिब एक महिनापछि त्यही घटनाबारे कन्फेसन गर्ने पात्र थिइन्, नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी परिचित नायिका परमिता राज्यक्ष्मी राणा।
जेलले बदलेको जीवन
जेल सजाय कटाउने यातना गृह हैन, अपराधको प्रायश्चित गराई जीवन सुधार्ने सुधार गृह हुनुपर्ने हो। कानुनमा जेललाई सुधार गृह भनिए पनि अवस्था भने यातना गृहबाट बदलिएको छैन। तापनि ढुंगामा पिपल टुसाएझैँ यातनागृहरुपी जेलमा बसेर पनि जीवन सुधार्न चाहनेहरु सुध्रिएकै छन्।
ढँटुवा रामकृष्ण : डिभोर्सको ट्वीस्ट एन्ड टर्न
कार्यक्रममा गायिका भोसलेसँगै ढकालले पनि गीत गाउने कार्यक्रम थियो। उनले गायिका भोसलेलाई ‘आगे आगे तोपैको गोला’ अनि ‘मोहनी लाग्ला है गाउँलेको बोलीले’ बोलको गीतमा साथ दिए। कार्यक्रम सकिएपछि ढकाल, नीलम र रानीसँगै कार्यक्रम हलबाट बाहिरिए।
बिर्सिएको त्यो दुर्घटना
गत शनिवार बुढानीलकण्ठमा लीला देवकोटाको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटनाको कारण देखियो, मदिरा, मस्ती अनि कानुन प्रतिको मिचाहा प्रवृत्ति। पात्र काठमाडौंका धनाढ्य परिवारका २१ वर्षे पृथ्वी मल्ल।
बिस्तारै गए पुगिन्छ, हतार गरे कुन्नी !
दैनिक जीवनमा सामान्य अनुशासन पालना नगर्दा ज्यानै जानेसम्मका घटना घटिरहेका छन्। तापनि किन सुधार हुन्न हाम्रो बानी ?
अविवाहित मिलनलाई उनको बहिनीको फोन आयो। ‘दादा, स्पर्म (वीर्य) डोनेट गर्नुपर्ने भयो !’